Soomaaliya, 09 September 2019
Safiirka UK ee Soomaaliya oo la kulmay madaxweynaha Somaliland
Safiirka Britain ee Soomaaliya, Ben Fender ayaa maanta tegay magaalada Hargeysa, halkaasi oo uu kula kulmay madax uu ka mid yahay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Barnaamijka Qurbe: Arday qur'aanka ku baratay Utah
Abaar ba’an oo xilligan ka taagan dhulka baadiyaha gobolka Gedo ayaa saameysay daaqa, deegaanka iyo dadkaba.
Qarax lala beegsaday sarkaal boolis oo ka dhacay Muqdisho
Qarax baabuur oo lala beegsaday sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada Xamar Jabab ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyo lala beegsaday ciidamada AMISOM
Ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe maanta. Ciidamada AMISOM ayaa rasaas ay fureen qaraxyada kadib waxaa ku dhintay qof shacab ah oo Soomaali ah
Xulka Qaranka oo Gaaray Harare
Xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa goor dhowayd gaaray magaalada Harare ee dalka Zimbabwe, halkaasi oo maalinta Talaadada ah ay kula ciyaari doonaa xilka Zimbabwe oo dalka Djibouti ay kaga soo badiyeen is-araggii hore ee is-reebreebka hore ee ciyaaraha Koobka Adduunka 2022-ka